Blood Types and Paternity Determination သွေးအုပ်စုနှင့် မိဘ စစ် မစစ် စစ်ဆေးခြင်း - သစ်ထူးလွင် (ကျန်းမာရေး) '; summ = summary_img; } var summary = imgtag + '
Blood Types and Paternity Determination သွေးအုပ်စုနှင့် မိဘ စစ် မစစ် စစ်ဆေးခြင်း
၁။ ဆရာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၄ နှစ်ပါ။ ဟိုတနေ့က Today news မှာသွေးသွေးချင်းပေါင်းရင် ပြန်ထွက်လာတဲ့ သွေးတွေအကြောင်းရေးထားတာ AB နဲ့ O နဲ့ပေါင်းရင် AB လုံးဝပြန်မထွက်နိုင်ဘူးလို့ တယောက်ကရေးထားလို့ပါ။ တကယ်ပဲ မရှိနိုင်ဘူးလားသိချင်လို့ပါရှင်။
၂။ ဆရာခင်ဗျ ကျွန်တော်က စစ်ကိုင်းတိုင်း ပုလဲမြို့ ကပါ။ အမိအဖတွေနဲ့ သားသမီးသွေး ဆက်စပ်ပုံကို သိချင်တာပါ။ ဥပမာ မိဘက O သွေးဆို သားသမီးက O သွေး၊ အဖက A အမိက B ဆို သာသမီးက ဘာသွေးဖြစ်မလဲ။ အဲလို သက်ရောက်မူသိချင်လို့ပါဆရာ။
၃။ ဒေါက်တာရှင့် ကျွန်မအသက် ၂၉ နှစ်ပါ။ လွန်ခဲ့သော Jan 2. 2016 ရက်နေ့တွင် သမီးဦးလေးကို ခွဲစိတ်မွေးခဲ့ပါတယ်။ သမီးလေးရဲ့သွေးအမျိုးအစားက အိုသွေးဖြစ်နေတာပါ ကျွန်မက B+ အမျိုးသားက A သွေးပါ အဲဒါကလေးက အိုသွေး ဖြစ်နိုင်ပါသလားဒေါက်တာ ကျွန်မ တိတိကျကျလေးသိချင်လို့ပါ။ ပြန်လည်ဖြေကြားပေးပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
၄။ မင်္ဂလာပါဆရာ။ ဆရာ့ရဲ့ သွေးအကြောင်း Post ကို ဖတ်ရတဲ့အတွက် ကျေးဇူးပါဆရာ။ အအေမေဟာ B သွေးဖြစ်ပြီ။ သားသမီးက O သွေးဖြစ်နိုင်ပါသလားဆိုတာ လေးစားစွာမေးပါရစေရှင်။
၅။ ဆရာ သမီးရဲ့သွေးက AB(-) ပါဆရာ။ သမီးအမျိုးသားရဲ့သွေးက O ပါဆရာ။ အခုသမီးမီးဖွားထား ၂၂ ရက်ရှိပါပြီ။ သမီးရဲ့ခလေးသွေးက AB(+) ပါဆရာ။ AB(-) နဲ့ AB(+) က သွေးတူပါသလားဆရာ။ AB(-) နဲ့ O နဲ့မှာ သမီးရဲ့ ကလေးသွေးက အမေနဲ့ကောအဖေနဲ့ကော မတူဘဲ AB(+) ဖြစ်နေရတာလဲ။ အဲ့လိုမျိုးကော ဖြစ်တက်ပါသလားဆရာ။
အငြင်းပွါးစရာရှိနေရင် လိုအပ်ရင် သွေးအုပ်စုကို ပြန်စစ်ရပါမယ်။
1. Blood donation မြတ်သော နီသော သွေး http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2012/01/blood-donation.html
2. Rh blood group system (အာရ်အိတ်ခ်ျ) သွေးအုပ်စုခွဲနည်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2012/05/rh-blood-group-system.html
3. Blood Grouping သွေးအုပ်စုခွဲခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.in/2013/08/blood-grouping.html
4. DNA testing မျိုးဗီဇစမ်းခြင်း http://dts-medicaleducation.blogspot.com/2011/04/dna-testing.html